ShonaTeam Leviticus « 8 »
Aroni nevanakomana vake vanogadzwa paupristi
8Zvino Jehovha wakataura kuna Mozisi achiti:
2 Tora Aroni nevanakomana vake pamwe naye, nenguvo zhinji, nemafuta ekuzodza, nenzombe diki yechipo chezvivi, nemakondohwe maviri, nedengu rezvingwa zvisina kuviriswa;
3 ugounganidza ungano yose kumukova wetende rekusangana.
4 Mozisi akaita Jehovha sezvaaiva amuraira; ungano ndokuunganidzwa kumukova wetende rekusangana.
5 Zvino Mozisi wakati kuungano: Ndicho chinhu Jehovha chaakaraira kuita.
6 Mozisi wakaswededza Aroni nevanakomana vake, ndokuvashambidza nemvura.
7 Zvino wakaisa nguvo refu paari, ndokumusunga chiuno nebhanhire, ndokumupfekedza nguvo, ndokuisa efodhi paari, nekumusunga chiuno nebhanhire reefodhi, ndokumusunga naro.
8 Zvino wakaisa hombodo yechipfuva paari, ndokuisa Urimi neTumimi pahombodo yechipfuva.
9 Wakaisawo ngundu mumusoro wake; ndokuisa pamusoro pengundu nechemberi kwechiso chake hwendefa regoridhe, korona tsvene, Jehovha sezvaakaraira Mozisi.
10 Zvino Mozisi wakatora mafuta ekuzodza, ndokuzodza tabhenakeri nezvose zvaivamo, ndokuzviita zvitsvene.
11 Zvino wakasasa nawo kanomwe paaritari, ndokuzodza aritari nemidziyo yayo yose, nedhishi, nechigadziko charo, kuzviita zvitsvene.
12 Wakadirawo amwe emafuta ekuzodza pamusoro waAroni, ndokumuzodza kumuita mutsvene.
13 Zvino Mozisi wakaswededza vanakomana vaAroni ndokuvapfekedza nguvo zhinji refu, ndokuvasunga zviuno nebhanhire, ndokuvasungira ngundu, Jehovha sezvaakaraira Mozisi.
14 Zvino wakauya nenzombe diki yechipo chezvivi; Aroni nevanakomana vake ndokuisa maoko avo pamusoro wenzombe diki yechipo chezvivi.
15 Zvino wakaibaya; Mozisi ndokutora ropa, ndokuisa panyanga dzearitari kupoteredza nemunwe wake, ndokunatsa aritari, ndokudururira ropa pazasi pearitari, ndokuiita tsvene kuiyananisira.
16 Zvino wakatora mafuta ose ari pamusoro pezvemukati, nemafuta epachiropa, neitsvo mbiri, nemafuta adzo; Mozisi ndokupisa paaritari.
17 Asi nzombe diki nedehwe rayo nenyama yayo nechizvizvi chayo wakapisa nemoto kunze kwemusasa, Jehovha sezvaakaraira Mozisi.
18 Zvino wakaswededza gondohwe rechipo chinopiswa; Aroni nevanakomana vake vakaisa maoko avo pamusoro wegondohwe.
19 Zvino wakariuraya; Mozisi ndokusasa ropa pamusoro pearitari kupoteredza.
20 Ndokugura gondohwe panhindi dzaro; Mozisi ndokupisa musoro, nenhindi, nemafuta.
21 Zvino wakasuka zvemukati nemakumbo mumvura; Mozisi ndokupisa gondohwe rose paaritari, chipo chinopiswa chehwema hunonhuhwira; chipo chemoto kuna Jehovha; Jehovha sezvaakaraira Mozisi.
22 Zvino wakaswededza rimwe gondohwe, gondohwe rekugadza; Aroni nevanakomana vake ndokuisa maoko avo pamusoro wegondohwe.
23 Zvino wakaribaya; Mozisi ndokutora rimwe reropa raro, ndokuisa pamucheto wenzeve yaAroni yerudyi, nepagunwe reruoko rwake rwerudyi, nepagunwe rerutsoka rwake rwerudyi.
24 Zvino wakaswededza vanakomana vaAroni; Mozisi ndokuisa rimwe reropa pamucheto wenzeve dzavo dzerudyi, nepagunwe reruoko rwavo rwerudyi, nepagunwe rerutsoka rwavo rwerudyi; Mozisi ndokusasa ropa pamusoro pearitari kupoteredza.
25 Zvino wakatora mafuta nebemhe nemafuta ose epamusoro pezvemukati nemafuta epachiropa, neitsvo mbiri nemafuta adzo, nebandauko rerudyi;
26 ndokubudisa mudengu rezvingwa zvisina kuviriswa zvaiva pamberi paJehovha, keke rimwe risina kuviriswa, nekeke rimwe rechingwa chakazorwa mafuta, nechingwa chitete chimwe, ndokuisa pamusoro pemafuta nepabandauko rerudyi.
27 Ndokuisa zvose pamaoko aAroni, nepamaoko evanakomana vake, ndokuzvizunguzira, chive chipo chinozunguzirwa pamberi paJehovha.
28 Mozisi ndokuzvitora kubva pamaoko avo, ndokupisa paaritari pamusoro pechipo chinopiswa; zvikava zvekugadza zvehwema hunonhuhwira; chipo chemoto kuna Jehovha.
29 Zvino Mozisi wakatora chityu ndokuchizunguzira, chive chipo chinozunguzirwa pamberi paJehovha; chikava mugove waMozisi pagondohwe rekugadza; Jehovha sezvaaiva araira Mozisi.
30 Zvino Mozisi wakatora mamwe emafuta ekuzodza, nerimwe reropa raiva riri pamusoro pearitari, ndokusasa pamusoro paAroni, nepamusoro penguvo dzake, nepamusoro pevanakomana vake, nepamusoro penguvo dzevanakomana vake pamwe naye; ndokuita Aroni mutsvene, nenguvo dzake, nevanakomana vake, nenguvo dzevanakomana vake pamwe naye.
31 Zvino Mozisi wakati kuna Aroni nekuvanakomana vake: Bikai nyama pamukova wetende rekusangana, muidyepo nechingwa chiri mudengu rekugadza, sezvandakaraira ndichiti: Aroni nevanakomana vake vachazvidya.
32 Zvino zvinosara zvenyama nezvechingwa muchapisa nemoto.
33 Uye hamungabudi pamukova wetende rekusangana mazuva manomwe, kusvika zuva rekuzara kwemazuva ekugadzwa kwenyu; nokuti achakutsaurai mazuva manomwe.
34 Sezvaaita nhasi, Jehovha waraira kuzviita, kukuitirai chiyananiso.
35 Naizvozvo muchagara pamukova wetende rekusangana masikati neusiku mazuva manomwe, mugochengeta kuraira kwaJehovha, kuti murege kufa; nokuti ndizvo zvandarairwa.
36 Zvino Aroni nevanakomana vake vakaita zvinhu zvose Jehovha zvaakaraira neruoko rwaMozisi.